Somaliland oo ka hadashay xariga Boqor Buur-madow – XAMAR POST
Somaliland oo ka hadashay xariga Boqor Buur-madow
Ciidamada Booliska Maamulka Somaliland ayaa xalay 08:00 fiidnimo waxa ay xireen Boqor Cusmaan Muxumed Maxamed (Boqor Buur-madow), kaasi oo si weyn looga yaqaano Soomaaliya.
Booliska ayaa soo qabashada Boqorka waxa ay u adeegsadeen qaab aan wanaagsaneyn, kadib markii ay u isticmaaleen awood Millitari, sida ay inoo sheegeen dadka degaanka.
Somaliland ayaa Boqorka ku eedeysay Qaran dumis, kadib markii ay tilmaamtay in Puntland uu kaga dhawaaqay arrin lidi ku ah Maamulka Somaliland, faafiyayna warar been abuur ah.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Somaliland Faysal Xiis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay isaga oo aan heysan amar inuu aaday Puntland, halkaasina uu kaga dhawaaqay ereyo ka soo horjeedo Somaliland, wuxuuna tilmaamay in loo gudbin doono xeer ilaalinta.
“Ciidanka Booliska waxay soo xireen Boqor Buur-madow, oo lagu eedeynayo inuu galay dambi qaran dumis ah, isaga oo Puntland kaga dhawaaqay arrin qaran dumis ah, Ciidanka xarigiisa waxay u mareen sifio sharci ah, cid u fasaxday iyo cid u ogolaatay midna ma jirto inuu aado Puntland.” Ayuu yiri Faysal Xiis.
Boqor Cusmaan Muxumed Maxamed (Boqor Buur-madow) oo Somaliland ay xirtay ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa degaanada Puntland, halkaasi oo uu uga qeyb galayay Xaflad ku saabsaneyd isir dhaqan.
Waxaa muuqata in maalmahan uu kordhay xariga Somaliland loogu geysanayo dadka waxgalka ah sida Abwaanada, Wariyeyaasha, Salaadiinta iyo Fanaaniinta, kuwaasi oo xabsiga loo dhigayo in ay qoraalo ku soo qoreen barahooda Internetka ama ay tageen degaano ka baxsan Maamulka.
Janaraal Gorod oo la kulmay talisyadda ciidamada Afrika iyo Mareykanka